ဇူလိုငျ 2020 – Healthy Life Journal
———၊ လရိပ်မေ ၊——— မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေရင်၊ ပါးဖောင်းလွန်းနေရင်၊ မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် အရေးကြောင်းဖြစ်နေရင် မျက်နှာယောဂကျင့်စဉ် ကျင့်ပေးတာကြောင့် နာကျင်မှုမရှိဘဲ သဘာဝကျကျ ငယ်ရွယ်နုပျို ကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။ အောက်ပါ ယောဂကျင့်စဉ်အဆင့် ၉ ဆင့်က မျက်နှာသွယ်လျ ချောမွေ့ပြီး အရေးကြောင်းကင်းစင်စေမှာဖြစ်လို့ နေ့တိုင်းလုပ်ပေးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. လူနာတွေကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအချက်တွေကို အဓိကထား ကုသပေးသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. The good physician treats the disease; The great...
နံနံပင်မှာ ဗီတာမင်၊ ဖလေဗနွိုက်နဲ့ ကလိုရိုဖီးလို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် အသည်း၊ သွေးနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို သန့်စင်စေတဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ ရောင်ရမ်းမှုကျစေတဲ့ အာနိသင်လည်း ရှိတဲ့အတွက် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာကနေ သွားဖုံးရောင်ရမ်းတာအထိ သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ နံနံပင်မှာ ဗီတာမင်စီ ပါဝင်မှုလည်း များတာကြောင့်...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ မျက်စိစောင့်ရှောက်ရေး အခြေခံအချက်အလက်တွေကို သိပါရစေဆရာ။ A. မျက်စိစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အခြေခံအချက်အနေနဲ့ စကားလုံးသုံးလုံးကို လူတိုင်းမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မျက်စိပြဿနာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ နီ၊...
ပင်ကိုစိုလက်နေသည့် နှုတ်ခမ်းသားအသွင် ဖန်တီးခြင်း
———၊ လရိပ်မေ ၊——— အဆင့်(၁) သန့်စင်ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းသား လိုင်းတလျှောက်ကို သဘာဝအရောင်ပါတဲ့ နှုတ်ခမ်းဆိုးတံ(Lip liner)နဲ့ ခြယ်လိုက်ပါ။ အဆင့် (၂) နှုတ်ခမ်းအပြည့်ကို မက်မွန်သီးရောင်နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးလိုက်ပါ။ အဆင့် (၃) နှုတ်ခမ်းသားအလယ်ကို နီညိုရောင်နှုတ်ခမ်းနီလေး ထပ်ဆိုးပေးပါ။ အဆင့်...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သွေးစုနာဆိုတာ ဆံချည်မျှင်အိတ်ထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ စုပုံပြီး ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ရာက နာကျင်တဲ့ ပြည်တည်အနာဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာနီမြန်းပြီး နာကျင်ရာက ပြည်တွေနဲ့ ပြည့်လာကာ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီး နာကျင်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပေါက်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ အနာစိမ်းကလည်း အရေပြားအောက်မှာ...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဒီနေ့ခေတ်မှာ အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အပျော်အပါး၊ ဂိမ်းအလွန်အကျွံဆော့ခြင်း စသဖြင့် စုံလင်တဲ့ မကောင်းတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိနေတာကို ဆယ်ကျော်သက်မိဘတွေ အထူးသတိထားရပါမယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ ၀င်လာချိန်မှာ ဖိအားတွေကလည်း များလှတာကြောင့်...
အိမ်စိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများက အရသာပိုရှိပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ပိုညီညွတ်
———၊ ကိုထက် ၊——— အိမ်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက စူပါမားကတ်တွေမှာ ရောင်းချတဲ့ သစ်သီးဝလံတွေထက် အရသာပိုရှိရုံမက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုလည်း ပိုမိုရှိကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို့က သက်သေပြခဲ့ကြပါတယ်။ ကူးဥယျာဉ်ခြံမြေမှ ကျွမ်းကျင်သူတို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အိမ်စိုက်ခရမ်းချဉ်သီးက ရောင်းချတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးတွေထက်...